Myanmar Got Talent Season2မင်းသားအက
20 ต.ค. 2558 | 1,292 Views
Myanmar Got Talent Season2အပိုင်း (၁)
20 Oct 2015 | 800 views ပြိုင်ပွဲဝင်အမည် - ကိုဟန်မှူးသော် Talent အက ကိုဟန်မှူးသော်ကတော့ မနှစ်ကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ Myanmar Got Talent Season 1 မှာလည်း လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ ကိုဟန်မှူးသော်လာရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲက အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုကတော့ သူရဲ့ မိဘအရင်းတွေကို ရ
Golden Buzzer Got Talent | Myanmar Got Talent 2015 Season 2
16 Sep 2015 | 878 views NEW for season2the Got Talent Golden Buzzer! Season2of Myanmar Got Talent starts Sunday 6th September 2015! Subscribe to the YouTube Channel: http://bit.ly/SUBSCRIBE_MGT Like on Facebook: https://www.facebook.com/mmgottalent
Myanmar Got Talent 2015 Season2Coming Soon MRTV4!
16 Sep 2015 | 910 views
MYANMAR'S GOT TALENT 2014 WINNER - WAI YAN NAING
12 Jan 2015 | 791 views Myanmar Got Talent 2014 Winner